Hahazaka valin-kitsaka ve ny mpitandro ny filaminana? | Hevitra MPANOHARIANA
izaho aloha dia tena miandry io Seacom sa Eassy io mihitsy nefa lasa miandry ny aterineton'i Madamobil ihany koa
Nampidirin'i jentilisa @ 21:39, 2009-08-03 [Valio]
Aleo heverina kely mihitsy ny momba ny itadiavana toeram-pizahantany an'Ambatondrazaka. Marihiko fa tena andro iray ihany no nandalovako tao amin'io tanàna iray io. Ny tsikaritra voalohany dia saiky ny tranon'ny EKAR no betsaka sy maro lehibe ao amin'ity tanàna ity. Raha heverina indray ny tanàna amin'ny ankapobeny dia ny endri-tranony maro mitovy amin'ny aty Imerina nandritra ny tapany voalohan'ny taonjato XX sady mitomandavana no tsara asongadiny sy karakarainy tsara. Fomba fijery an'olona iray sambany tany io aloha. Fa tokony hitoetra amin'ny maha-toeram-pambolena azy ihany koa io tanàna io.
Tsy voalazako moa fa raha nankany amin'ny faritra Alaotra aho dia tahaka ny hoe izaho irery no mpandeha tsy nisahana varotra, izany hoe tsy nitondra entam-be, tao anaty fiara nandehanako. Raha amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nivonona ho tanànam-pizahantany izy nefa azo ampiroboroboana io sehatra iray io. Azo atao ny mandray ho lalam-pizahantany ny mihodina ny farihin'Alaotra izay karazan'ny voahodidin'ny arabe azon'ny fiara andehanana soa amantsara fa tsy mbola misy aloha ny foto-drafitr'asa vonona handray vahiny amin'izany.
Ny tanàna nipetrahako maharitraritra kely tany an-toerana moa dia Amboavory, tanàna tokony ho lehibe saingy ny sekoly lehibe indrindra ao dia CEG. Mandrato fianarana ao Ambatondrazaka na aty Antananarivo ny ankizy te-hanohy fianarana ary izay tafakatra avoavo tsy misy mitodi-doha intsony hany ka matetika mpiandry trano sisa no tena mitoetra amina trano lehibe any.
Nampidirin'i jentilisa @ 21:58, 2009-08-03 [Valio]
Efa misy lahatsoratra amin'ny teny malagasy koa anie io Seacom lazainao io e! tsindrio ny rohy!
Nampidirin'i tsindrio eto @ 22:44, 2009-08-03 [Valio]
ny sakafo matsiro adino ny nitantara anazy?
Nampidirin'i simp @ 20:29, 2009-08-04 [Valio]
Nampidirin'i jentilisa @ 21:41, 2009-08-04 [Valio]
asa, za nge manotany e :)
tsy misy hoe ganagana nahandro speciale Ambatondrazaka nga?
na hoe trondro... na tsy haiko eee
fa i toi kosa aloha tena mandende mintsy an. Tena mahay manao vankasy en bonne et due forme... misaotra mitantara eee
Nampidirin'i simp @ 20:22, 2009-08-05 [Valio]
Raha nivezivezy tsimoramora ireo fiaran'ny FIS dia hitako misoritra amin'ny tavan'ireo mpijorojoro sy manan-draharaha ivelan'ny sehatra mpandoa hetra ny tahotra sy ny fahavinirana. Hafa dia hafa mihitsy ny fomba fijerin'izy ireo ny fiara mandehandeha. Ny resaka re ho an'izay sahy miteny ihany koa moa dia tena miandry kendri-tohina mihitsy hamelezana ny mpitandro ny filaminana ny olona. Ataoko fa efa fantatry ny sampam-pitsikilovan'ireny mpitandro filaminana ireny mihitsy ny hatezeran'ny olona sasany ireny nefa iniany mbola tsindriana hatramin'izao na dia miandry fotoana hiborahany aza ry zareo. Dia aza lazaina intsony fa tsy nampoizina ny zava-nitranga raha misy fipoahana "hatezeram-bahoaka" tampoka rehefa tonga izay fotoana izay. Dia aza gaga intsony rehefa sahy miatrika amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izay ny olona indray andro any... ary tsy olona voakarama ireo.
ALAIVO SARY matetika ireo FIS izay afaka manao izany. Aoka hiparitaka amy ntoerana maro (web site isankarazana) ny sary nireo olondratsy ireo. Na ela na aigana tsy maintsy mivaly aminy sy ny vadiamanjanany izao mahazo antsika izao.
Nampidirin'i sary @ 18:40, 2009-08-07 [Valio]